बाइबलका कथाहरू: स्तिफनसलाई ढुंगाले हान्छन् - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अटेसो अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अल्बेनियन अस्ट्रेलियन साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आएमारा आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) आसामी इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उइघुर (अरबी) उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन एस्टोनियन साङ्केतिक भाषा ओतोमि (मझक्विटल उपत्यका) ओरोमो ओसेसियन कन्नडा काचिन काजाक काबाइली काबार्डिन-सर्केस काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किश किसी केक्ची कोंगो कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा कोस्टा रिकन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुना गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चुभास चेक चेक साङ्केतिक भाषा जर्जियन जर्मन जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुला जुलू झेल्तल टगालोग टर्कमेन (सिरिलिक) टर्किश टाटार टिभ टेटन डिली टोंगन डच डच साङ्केतिक भाषा डाँग्मे डेनिश ड्रेहु ताङ्काराना ताजिकी तामिल तारास्कान तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) निऊ निकारागुआन साङ्केतिक भाषा नुएर नेपाली नोंगा न्यानेका पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पाराग्वेयन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फिनिश साङ्केतिक भाषा फिलिपिनो साङ्केतिक भाषा फेरोई फ्रान्सेली फ्रान्सेली साङ्केतिक भाषा बम्बारा बाओले बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्रिटिश साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेजो भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिक्सटेक (ग्वेरेरो) मिजो मिस्किटो मिहे मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा मेन्डे म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रोमानियन लाओशियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुग्बारा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलफ वोलाइटा शोना श्वा सर्बियन साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सेत्स्वाना सेना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
चित्रमा हेर त! घुँडा टेकेर बसेको यो मान्छे स्तिफनस हो। ऊ येशूको विश्वासी चेला हो। तर हेर, उसलाई अहिले मान्छेहरूले ढुङ्गा हान्दैछन्। उनीहरूले स्तिफनससित किन त्यस्तो खराब व्यवहार गरेका होलान्?
किनभने परमेश्वरले स्तिफनसलाई अचम्मलाग्दा चमत्कारहरू गर्ने शक्ति दिनुभएको थियो। तर यी मान्छेहरूलाई उसले त्यसो गरेको मन पर्दैन। त्यसकारण तिमीले किन अरूलाई प्रचार गरेको भनेर उनीहरू निहुँ खोज्न थाल्छन्। तर परमेश्वरले स्तिफनसलाई धेरै बुद्धि दिनुहुन्छ र बरु उल्टो उनीहरूले नै झूटा कुरा सिकाइरहेका छन् भनेर स्तिफनसले छर्लंग पारिदिन्छ। यसले गर्दा उनीहरू रिसले मुरमुरिन्छन् अनि स्तिफनसलाई समात्छन्। त्यसपछि अरू मान्छेहरू जम्मा गरेर स्तिफनसको विषयमा झूटो कुरा बोल्न लगाउँछन्।
अरूको झूटो कुरा सुनिसकेपछि प्रधान पूजाहारीले स्तिफनसलाई यसो भनेर सोध्छ: ‘के यिनीहरूले भनेको कुरा साँचो हो?’ अनि स्तिफनसले बाइबलबाट एउटा राम्रो भाषण दिएर आफ्नो जवाफ दिन्छ। पहिले-पहिले पनि खराब मान्छेहरूले यहोवाका अगमवक्ताहरूलाई दुःख दिएका थिए भनेर स्तिफनसले आफ्नो भाषणको अन्तमा बताउँछ। त्यसपछि उसले यसो भन्छ: ‘तिमीहरू पनि त्यही खराब मान्छेहरू जस्तै छौ। तिमीहरूले परमेश्वरको सेवक येशूलाई माऱ्यौ। तिमीहरू परमेश्वरको आज्ञा पनि मान्दैनौ।’
यो सुनेर धर्मगुरुहरू रिसाउनसम्म रिसाउँछन्! उनीहरू रिसले दाह्रा किट्न थाल्छन्। तर स्तिफनस शीर उठाएर यसो भन्छ: ‘हेर, म येशूलाई स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिनेपट्टि उभिरहेको देख्छु।’ स्तिफनसले बोल्न सिध्याउन नपाउँदै धर्मगुरुहरू आ-आफ्नो कान थुन्छन् र स्तिफनसमाथि झम्टन्छन्। उनीहरूले स्तिफनसलाई घिसार्दै सहरबाहिर लैजान्छन्।
त्यहाँ उनीहरूले आ-आफ्नो बाहिरी लुगा फुकालेर एक जना जवान मान्छे शावलको जिम्मा लगाउँछन्। चित्रमा हेर त, के तिमी शावललाई उभिएर हेरिरहेको देख्छौ? त्यसपछि मान्छेहरूको हूलले स्तिफनसलाई ढुंगा हान्न थाल्छ। मान्छेहरूले ढुङ्गाले हिर्काइरहेको बेला तिमीले चित्रमा देखेजस्तै स्तिफनस घुँडा टेकेर परमेश्वरलाई यसो भन्दै प्रार्थना गर्छ: ‘हे यहोवा, उनीहरूलाई यो खराब कामको सजाय नदिनुहोस्।’ धेरैजसो मान्छे धर्मगुरुहरूको लहैलहैमा लागेर उसलाई ढुङ्गा हिर्काउन तम्सिएका हुन् भनेर स्तिफनसलाई थाह थियो। त्यसपछि स्तिफनस मर्छ।
अरूले तिमीसित नराम्रो व्यवहार गऱ्यो भने के तिमी त्यसको बदला लिन्छौ अथवा तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहोस् भनेर के तिमी परमेश्वरलाई बिन्ती गर्छौ? तर येशू र स्तिफनसले त्यसो गर्नुभएन। उहाँहरूले खराब व्यवहार गर्नेहरूलाई समेत दया देखाउनुभयो। हामीले पनि उहाँहरूले जस्तै गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ।
प्रेरित ६:८-१५; ७:१-६०.
स्तिफनस को हो? परमेश्वरले उसलाई के गर्न मदत गर्नुहुन्छ?
स्तिफनसले भनेको कुन कुराले गर्दा धर्मगुरुहरू असाध्यै रिसाउँछन्?
स्तिफनसलाई सहरबाहिर घिसारेर ल्याएपछि मान्छेहरूको भीडले उसलाई के गर्छ?
चित्रमा हात बाँधेर लुगानेर उभिरहेको मान्छे को हो?
मर्नुअघि स्तिफनसले के भनेर यहोवालाई प्रार्थना गर्छ?
अरूले हामीलाई खराब व्यवहार गर्दा स्तिफनसले जस्तै हामीले पनि के गर्नुपर्छ?
प्रेरित ६:८-१५ पढ्नुहोस्।
यहोवाका साक्षीहरूको प्रचार कार्यलाई रोक्न धर्मगुरुहरूले के-कस्ता छली चालहरू चलेका छन्? (प्रेरि. ६:९, ११, १३)
प्रेरित ७:१-६० पढ्नुहोस्।
के कारणले गर्दा स्तिफनसले महासभाअघि सुसमाचारको पक्ष लिन सक्यो र उसको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (प्रेरि. ७:५१-५३; रोमी १५:४; २ तिमो. ३:१४-१७; १ पत्रु. ३:१५)
हाम्रो कामको विरोध गर्नेहरूलाई हामीले कुन दृष्टिले हेर्नुपर्छ? (प्रेरि. ७:५८-६०; मत्ती ५:४४; लूका २३:३३, ३४)